Qiso Cajiib Ah:- Xafso Luqmaan waxaa la afduubay iyadoo salaad ku jirto. | Warbaahinta Ayaamaha
Qiso Cajiib Ah:- Xafso Luqmaan waxaa la afduubay iyadoo salaad ku jirto.
MUQDISHO-AYAAMAHA-Sakariye Maxamed Luqmaan oo la dhashay Xafso ayaa sheegay in walaashii markii la afduubayay ayaa salaad ku jirtay.
“Saaxiibteed ayaa u waday mel la yiraahdo Kayole. Salaaddii Maqribka ayaa la gaaray. Iyadoo sujuud ku guda jirta ayay laba nin soo galeen oo ay xoog ku wateen oo qashin ayay afka uga gureen si aysan u qeylinin, wayna ceejiyeen. Dhaawaca ay qabta, markii la afduubayay ayuu soo gaaray,” ayuu yiri Sakariye.
Waxay booliska qabteen nin 24 jir ah oo la sheegay in uu ka qeyb ka ahaa dadkii afduubtay Xafso Maxamed Luqmaan
Xafsa ayaa laga soo furtay burcad ay ugu afduubneyd magaalada Nairobi, ayaa xalaadeeda ay wanaagsan tahay iyadoo wali ku jirta isbitaalka, sida ay sheegen xubna ka tirsan qoyskeeda.
Booliska Kenya ayaa shalay sheegay inay ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan Xafso Maxamed Luqmaan. Waxaa lagu hayay guri cidla oo mugdi ah oo ku yaalla xaafadda Kayole ee magaalada Nairobi.